Muxuu ka yiri Ansu Fati goolkiisii ugu horeeyay ee xulka qaranka Spain? – Gool FM
Muxuu ka yiri Ansu Fati goolkiisii ugu horeeyay ee xulka qaranka Spain?
Dajiye September 7, 2020
(Spain) 07 Seb 2020. Da’ayarka xulka qaranka Spain iyo kooxda Barcelona ee Ansu Fati ayaa ka hadlay guushii weyneyd ay xalay ka gaareen dhigooda Ukraine iyo goolkiisii ugu horreeyay uu u dhaliyay La Roja.
Xulka Spain ayaa xalay guul ka gaaray dhigooda Ukraine kulankoodii labaad ee tartanka UEFA Nations League, kaddib markii ay kaga adkaadeen 4-0.
Goolasha xulka qaranka Spain ayaa waxaa u kala dhaliyay Sergio Ramos oo 2 gool ah, Ansu Fati oo noqday ciyaariyahankii ugu da’ada yaraa ee gool ku dhaliya maaliyada La Roja, iyo hal gool uu dhaliyay Ferran Torres.
17 jirkan ayaa wareysi uu ku bixiyay ciyaarta kaddib Taleefishinka Teledeporte, wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay goolkan, wuxuuna yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay, gaar ahaan guusha uu xulkeyga gaaray maanta, waxaan ciyaarnay kulan weyn”.
“Waxaan ciyaarnay ciyaar aad u wanaagsan muddadii 90-ka daqiiqo ahayd, waxaan ku faraxsanahay inaan la shaqeeyo tababare sida Luis Enrique iyo dhammaan asxaabteyda, waxay igu soo dhoweeyeen gacmo furan waxayna i siiyeen kalsooni”.
”Hada waa in aan u shaqeeyaa si adag si aan ula sii joogo xulka qaranka, waa inaan tababar badan ku sameeyaa Barcelona oo aan sugaa fursad aan ka faa’ideysto oo aan ku muujiyo awoodahayga”.
Ansu Fati ayaa ciyaaray 33 kulan oo kooxda Barcelona ah dhamaan tartamada kala duwan xilli ciyaareedkii dhawaan la soo gabagabeeyay ee 2019/20, wuxuu dhaliyay 8 gool, laakiin xilli ciyaareed aad u muhiim ah ayaa sugaya isaga, kaasoo la filayo inuu fursado badan ka heli doono tababaraha reer Holland ee Ronald Koeman, kaasoo doonaya inuu u dhiso jiil dhalinyaro ah kooxda ku ciyaarta garoonka Camp Nou.
RIKOORRO: Maxay ka dhigan tahay goolashii uu xalay ka dhaliyay Sergio Ramos xulka Ukraine??
Agaasimaha ciyaaraha PSG oo ka hadlay mustaqbalka Neymar iyo Mbappé